Jacayl | KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: July 25, 2020 00: 30 No Comments
Waxaa ku dhaca qof kasta ama wax kasta. Si kastaba ha noqotee, dareennada ka baxsan, waxaa jira tixgelin kale. Mararka qaarkood waa inaad iloobaan waxa ay dareento waxayna xasuusataa waxa ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: July 25, 2020 00: 20 No Comments
Dooddu way furan tahay! »A. Haweeneyda sugaysay ninka kaamilka ah B. Ninkii sugayay haweeneyda saxda ah Jacaylku ma jiro… Xaq mise been? Amarka ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: July 25, 2020 00: 00 No Comments
Ninka iyo naagta, mid walbaa waa dhameystirayaa kan kale "Ninkuna wuxuu ku raaxeysanayaa farxadda uu dareemayo, haweeneydu waxay ku raaxeysataa farxadda ay keento" Markaad kaligaa tahay / kaligaa tahay ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: July 18, 2020 00: 00 No Comments
Haweeney Madow / Afrikaan ah, oo leh quruxdeeddeeda madow / Afrikaanka: Fiiri: waxay ilaalisaa himilo sharaf leh; Si aad u ogaato: way ogtahay, qiyamkeeda dhabta ah; Awood: waxay badali kartaa adduunka meesha ...	Akhri wax dheeraad ah
Xusuusnow, oo raggii reer binu Israa'iilna mar kalay dileen; oo ah "Hitter, oo ah nin reer binu Israa'iil"; waxay siisay dumarka kali ah ee doonaya inay nin guursadaan sida ugu dhaqsaha badan
Posted By: KongoLisolowaa: July 15, 2020 03: 12 No Comments
Wadaadkan, oo ah nin Ilaah oo reer binu Israa'iil ah ayaa u sheegay haweenka aan guursan inay is-qaawiyaan, inay is dhunkadaan dabada midba midka kale si ay u guursadaan. ...	Akhri wax dheeraad ah
Daacadnimo, daacadnimo, xaasasnimo badan, jahwareer, jahwareer: saami qaybsiga nin walba jacayl ama nolol guur; in nin walba laga helo, meeshuu yahay, meeshuu ku yaal, qeybta uu ku yaal
Posted By: KongoLisolowaa: July 14, 2020 03: 24 No Comments
1. Ragga dhabta ahi waa aamin. 2. Ragga sharafta leh waa tiro badan. 3. Ragga jahawareersan oo isku murugsan waa dad is qaba oo aan aamin lahayn. Run mise been? Gacaliye KongoLisolowaa & KongoLisoloshaqada ...	Akhri wax dheeraad ah
Aug09 12: 36